ဘုရားပေါ် အတင်းလာပို့ထားတဲ့ မြွေတွေကို တောထဲကို ပြန်လွှတ်ပေးကြပါ - Zet Star
ဘုရားပေါ် အတင်းလာပို့ထားတဲ့ မြွေတွေကို တောထဲကို ပြန်လွှတ်ပေးကြပါ
ကျွန်တော်က ခုလောလောဆယ် သဘာ၀ပတ်၀န်းကျင်အရေး.. တိရစ္ဆာန်အခွင့်အရေး.. အမျိုးသားရေး.. အမျိုးသမီးရေး.. ဂေးအရေး.. ဘယ်အရေးအတွက်မှတက်ကြွလှုပ်ရှားသူမဟုတ်ပါဘူး.. သူတို့အရေးနေနေသာသာ ကိုယ့်ထမင်းစားရဖို့ ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်ရှာရေးတောင် တက်ကြွလှုပ်ရှားနေသူမဟုတ်ပါဘူး.. အားနေ အိပ်ဖို့ချောင်းနေတဲ့ကောင်ပါ..
လူမှန်နေရာမှန်ဖြစ်ရေးလေးကိုတော့ နည်းနည်း စိတ်၀င်စားသလိုရှိပါတယ်.. ယောက်ျားဟာယောက်ျားနေရာ.. မိန်းမကမိန်းမနေရာ.. လင်းပိုင်ကလင်းပိုင်နေရာ.. မြွေဟာမြွေနေရာပေါ့.. တစ်ခုသိချင်မိတာက မြွေတွေဟာ ဘုရားမှာတကယ်ပျော်သလားဆိုတာပါပဲ..
ငယ်ငယ်တုန်းက ပလိပ်ရောက်ရင် မြွေဘုရား၀င်ပေးဖို့ အမြဲပူဆာတယ်.. အထူးအဆန်းကိုး.. မြွေတွေဟာ တောထဲမှာ ညှို့တတ်တယ်ဆိုရုံတင်မဟုတ်ပါဘူး.. သူတို့ရှိတဲ့နေရာ လူလာအောင် စွဲဆောင်နိုင်ကြပါတယ်.. ဓနုဖြူက မြွေတွေအများကြီးရှိတဲ့ဘုရားလဲရောက်ဖူးတယ်..
ပထမဆုံးဘ၀င်မကျဖြစ်မိတာက လွန်ခဲ့တဲ့ငါးနှစ်လောက်က မင်းဘူးမှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့မြွေပါ.. ၄ပေ ၂ပေလောက် အလှူခံမှန်ပုံးထဲမှာ ထည့်ထားခံရတဲ့ အနာတွေဗရဗွနဲ့မြွေပေါ့.. ဘ၀မှာမြင်ဖူးသမျှထဲ အစုတ်ပြတ်သတ်ဆုံး စပါးကြီးမြွေဆိုလဲမမှားပါဘူး.. ပုံ‌တောင်ရိုက်လာခဲ့သေးတယ်..
စဉ်းစားမိတာက ကျွန်တော်သာမြွေဆို ဒီလိုနေရာမှာ ပျော်မလားပေါ့.. မြွေက အကြမ်းဖျဉ်းပေါက်တဲ့မြွေ (venomous) နဲ့ ပတ်ပြီးညှစ်တဲ့မြွေ (non-venomous) နှစ်မျိုးရှိမယ်ပေါ့.. နှစ်မျိုးလုံးက အသားစားတွေချည့်ပါပဲ.. သတ်သတ်လွတ်စားတဲ့မြွေမရှိသလို ပေါက်ပေါက်ဆုပ်လဲကြိုက်မယ်မထင်ပါဘူး.. မြွေတွေ နွားနို့ကြိုက်လား ကျွန်တော်မသိပေမယ့် တောထဲမှာ ယုန်တို့ ကြွက်တို့ ညှစ်ပတ်သတ်ဖြတ်စားသောက်တတ်သောသဘာ၀ရှိသူတွေအနေနဲ့ နွားနို့သောက်ရရုံ အာသာပြေမယ်မထင်ပါဘူး.. ဒါက ကိုယ်ချင်းစာကြည့်တာပါ..
ပြီးတော့ Python တွေဟာ ဂူးဂဲလ် အလွယ်ခေါက်ကြည့်ရုံနဲ့ သိနိုင်တဲ့ အထီးတည်းနေတတ်တဲ့သတ္တဝါတွေဖြစ်ပါတယ်.. သူတို့ကို အထွေးလိုက် ဒွေးရောယှက်တင်ထားတာ သဘာ၀နဲ့ဆန့်ကျင်ပါတယ်.. အော်ဟစ်ဆဲဆိုနေတတ်သော သဘာ၀မရှိလို့ ငြိမ်ပြီးခွေနေကြတိုင်း ပျော်နေကြတာမဟုတ်ပါဘူး..
သူတို့ အဆင်မပြေကြပါဘူး..ကျွန်တော်တို့ ပတ်၀န်းကျင်ကလူတွေ မြွေတွေ့တိုင်း ဘုရားပို့တတ်တဲ့အကျင့်ကို ဖျောက်ဖို့ကောင်းတယ်ထင်ပါတယ်..
ဒါဟာမြွေတွေအတွက်ချည့် ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး.. နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အဆင်ပြေဖို့ပါ.. ခင်ဗျားအသင်္ချေအသင်္ချာ ဘ၀ဘ၀တွေပါရမီဖြည့်ပြီးနောက် ဘုရားအဖြစ်ပွင့်လို့ ခင်ဗျားအပေါ်မြွေတစ်ကောင်လာတင်ရင် ခင်ဗျားလဲကြိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူး.. ကျွန်တော်ဘုရားဖြစ်လဲလာမတင်ပါနဲ့.. ကျွန်တော်မကြိုက်ပါဘူး..
ဘာလို့မကြိုက်လဲဆိုတော့.. နံပါတ်တစ်.. ဒီကောင်တွေသည် အရမ်းလေးပါတယ်.. နံပါတ်နှစ်.. အန္တရာယ်ရှိပါတယ်.. နံပါတ်သုံး.. ဘာဖြစ်လို့တုန်း..? ပြီးတော့.. ဘာလုပ်ဖို့တုန်း? ဒီတော့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အဆင်မပြေတဲ့ကိစ္စကို (အရမ်းကြီးမလိုအပ်ဘူးဆိုရင်) ကျွန်တော်တို့ လူမှုအဖွဲ့အစည်းကနေ တဖြည်းဖြည်းဖယ်ရှားသွားကြဖို့ လိုပါတယ်..
မြွေတွေဟာ တောထဲမှာရှိကြရမှာဖြစ်ပြီး သူတို့အစာ.. သူတို့အာဟာရ နဲ့ သူတို့ရဲ့ရှာ‌ဖွေစားသောက်နိုင်စွမ်းကို သဘာ၀ကချိန်ဆပေးထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်..မြွေစာကျွေးသူတွေမလိုပါဘူး..ငှက်လွှတ်သူတွေမလိုပါဘူး..ငါးလွှတ်သူတွေ မလိုပါဘူး..
ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်သူတွေ ဆိုတာ marketing သ‌ဘောတရားအရ ကြည့်မယ်ဆို demands တွေချည့်ပါပဲ.. demands ရှိရင် supplies ရှိလာပါတယ်.. ဒီ supplies တွေဟာ ၀မ်းနည်းစရာကောင်းလောက်အောင် အကုသိုလ်တွေဖြစ်နေတတ်ကြပါတယ်..
စား၀တ်နေရေးသဘောတရားကိုနားလည်ပါတယ်.. ဂေဟစနစ်ရဲ့အကြမ်းဖျဉ်းအလုပ်လုပ်ပုံလေးလဲ အားလုံးနားလည်‌ဖို့ လိုပါတယ်.. စပါးကြီးမြွေတွေဟာ ဘုရားမှာမပျော်ပါဘူး.. ဘယ်တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်မှ လူတွေဝိုင်းကြည့်တဲ့နေရာမှာမပျော်ပါဘူး..
ဆန္ဒရှိလွန်းလို့သူ့ဘာသူတက်ခွေနေရင် မပြောပါဘူး။ မဟုတ်ရင်တော့.. သူတို့ကို တောထဲပြန်လွှတ်ပေးကြရအောင်ပါ..
← မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ရရှိလာပါက ဦးစားပေး ထိုးနှံပေးမည့်သူများ စာရင်း
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း (၂၄) နာရီအတွင်း မုန်တိုင်း ဖြစ်လာမည် →